Arevik Arzumanova mayelana nendlela yokwakha ibhizinisi nomndeni - Psychology 2022
Arevik Arzumanova mayelana nendlela yokwakha ibhizinisi nomndeni
Mayelana nokuqala ibhizinisi
Indlela yokusebenza nokuba ngumama
Mayelana nokuthi owesifazane webhizinisi kufanele abe yini
U-Arevik Arzumanova ungowesifazane webhizinisi ophumelelayo, umama, unkosikazi kanye nentombazane enhle nje ekhuthaza omama abaningi abasebasha ngesibonelo sakhe.
U-Arevik Arzumanova akesabi ukubekela inselele ukwesaba kwakhe, uhlale efuna into entsha, futhi uthanda izimonyo nezingubo ezinhle kakhulu. Futhi, yebo, akanamahloni nhlobo ngakho.
Lapho esethathe isinqumo sokuthi ngeke acwile enkambisweni “yomama” - wakwenza.
Iphrojekthi yethu ethi #Mamaslet "yacatshangelwa" kuphela ngezicelo zomuntu siqu futhi, njengoba kwenzeka, besingesodwa kulesi sicelo. Mina nozakwethu uNatasha Kalinina sasinezingane futhi sifuna ngempela ukuxhumana nomama, kodwa hhayi ngamanabukeni nezingono, kodwa mayelana nezethu, abesifazane.
Ngangifuna ukubalekela isimiso sasekhaya, ngikhulume ngamaphrojekthi esikhathi esizayo, izimonyo, abayeni, izingubo zokugqoka, bese-ke, ngabantwana.
Yile ndlela kanye umhlangano wokuqala we- #Mamaslet owenzeka ngayo eminyakeni emi-4 edlule kubantu abayi-15. Manje sihlela imikhosi emikhulu e-megalopolises yase-Ukraine.
Futhi mina no-Natasha saba abaholi bemibono kwabanye omama, kanye nama-blogger.
Wonke amaphrojekthi ethu, imicimbi yadalwa kuqala ngokwethu, futhi ngemva kwalokho yathola impendulo kwabanye omama. Phela, sonke sikubude obufanayo futhi sifuna into eyodwa - ukuba bahle, baphumelele, abasubathi.
Ubunzima ebhizinisini labo abupheli. Manje ithimba lethu alikwazi ukubhekana nezicelo, futhi sizokwandisa futhi.
Kunzima kakhulu kimina ukusebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto - kuyizimpelasonto lapho siba nemicimbi. Kunzima ukulalisa ingane futhi ivuke ngenkani ukuze iqedele ukubhala izincwadi, ukuhlela ama-athikili futhi uqhamuke nemibono yokudala yemisebenzi emkhosini. Ngifuna amasonto ambalwa ekhefini lokuyoteta, bese ngibuyela emsebenzini.
Siphefumulelwe isipiliyoni saseYurophu, sihamba, sifunda amabhulogi kanye ne-Instagram, sixhumane nababhalisile bethu futhi sihlale sibuza: "Ushoda ngani? Sifuna ukuba ngcono!" Kwesinye isikhathi imibono iza emaphusheni.
Isibonelo, kuMom-to-be Brunch, ngiphuphe ngendawo yesithombe eneklabishi langempela, esilenzile - inhliziyo eyenziwe ngeklabishi langempela lasePeking, okundiza phezu kwalo ogolantethe abane-convolutions, kanye namabhola amaningi apinki naluhlaza okwesibhakabhaka nxazonke.. Kuvele kupholile.
Kunzima ukusebenza nomuntu uma ungazethembi lowo muntu. Mina no-Natasha Kalinina sazana iminyaka engu-16 futhi besingabangane, kwakukhona izinto ezihlukene, kodwa uyakwazi ukuhamba ngokushesha, engimhlonipha ngokuhlanya, futhi ngafunda ukuyeka izikhathi ezithile futhi ngifune okuncane.
Sikhuluma njalo futhi musa ukucasuka - lena umthetho oyinhloko. Umdlalo wokuthula futhi “akaqagele ukuthi yini engalungile” awuphathelene nathi. Sinemicabango evamile kanye ne-vector evamile, ngakho-ke sikhula ndawonye.
Siyashintshana - wandiza wahamba, ngiqondisa yonke into, ngandiza - yena esikhundleni sami. Futhi okubaluleke kakhulu - ukwethemba okuphelele kukho konke - ezezimali, ukuxhumana nabalingani, njalonjalo.
Into enzima kakhulu ukuphula iphethini ekhanda lami mayelana "nomama okahle owenza konke" futhi aphile nemizwa nezifiso zakhe. Funda ukuphathisa izinqubo ezingakujabulisi - kimina ukuhlanza noku-ayina - ngicela inkampani yokuhlanza ikwenze. Nganginomzanyana, manje sekuyinkulisa ethatha indawo yomzanyana, isikhungo semfundo nezemidlalo.
UMika ubelokhu eya e-Kudryavsky unyaka manje, futhi lesi kwakuyisixazululo esingcono kakhulu: Angihambi edolobheni kusukela ekilasini kuya ekilasini - indilinga yaseshashalazini, izibalo, isiNgisi nesiFulentshi, igumbi likasawoti kanye nomelaphi wokukhuluma - konke kungaphakathi. inkulisa yethu. Futhi ngikulungele ukusebenza okuningi ukuze ngikwazi ukukukhokhela, ngoba ngikulungele ukudlulisela lokho engingakwazi ukukwenza ngokwami ​​- ukubhekana nemfundo yengane.
Yebo, angikwazi ukukuhlakaza ukugeza izinsuku ezi-2, hhayi uku-ayina ilineni lombhede, ukungapheki isidlo sakusihlwa nsuku zonke futhi ngingaphakeli amaqebelengwane ashisayo ekudleni kwasekuseni - angikufuni lokhu kimi, kodwa ngikwenza ngokuvumelana nomthetho. isifiso namandla ami.
Kwangithatha iminyaka embalwa ukuqonda ukuthi umhlaba ubungeke ungifikele, uma ngingazungeza indlu njengerobhothi. Ngithole i-"Zen" yami futhi ngilwela ukuvumelana "kokufuna" kwami ​​​​kanye "nokungakwazi".
Ezweni lethu nasemphakathini, ikhwalithi eyinhloko ukuzizwa nokuzilalela, ukuphazamisa imibono yabeluleki. Ngikholwe, ukube bengilalela wonke umuntu okubona kungumsebenzi wabo ukufundisa, ukufundisa, ukuvula amehlo nokweluleka, bengingahamba ngiyohlala emgedeni. Umphakathi wethu awukabekezeli futhi awunasimilo, ngoba kusezitaladini zethu lapho abantu bemba izimbali emibhedeni yezimbali futhi bakhafule ama-urns.
Ngakho-ke, ukungalaleli nokwenza izinto zakho kuyiseluleko esibaluleke kakhulu. Phila impilo yakho futhi uyimise ngendlela ozizwa ngayo. Jabulela impilo yakho - kusukela ku-croissant entsha ekuseni, kusukela kumculo ogcwele amandla emotweni evulekile, kusukela ku-lipstick ebomvu kanye nendodana enqume ukulala phansi esitolo. Ngendlela, uma indodana yakho ihlele "ukuqamba amanga" emakethe, ungalala eduze kwayo noma uyimeme ukuba ilale eduze nerejista yemali - kukhona ama-chocolate aseduze.
Izingubo ezinhle nezesekeli ziyinjabulo yami, engikuthandayo futhi kunikeza amandla ekuseni ukuze ngindize ngiphume endlini ngijabule.
Ngiyazithanda nje: kuwo wonke amasentimitha ami angu-153, ngokulingana komzimba ongaphelele nezinwele ezigoqene nezingalawuleki. Ngiye ngafunda ukwethula lawa maqiniso njengezinzuzo, futhi izingubo ezinhle nezinto ezisetshenziswayo ziyisigqila sami esincane, into engizilibazisa ngayo kanye nethemba lokudlulisela yonke into endodakazini yami.
Uma ngikhuluma iqiniso, ngiqinisekile ukuthi owesifazane ongazithandi ngeke aluthole uthando olufanayo kowesilisa oseduze. Zonke izakhiwo, ukungabaza kanye "namaphela" kuvela kuphela ekungakwazini ukuzithanda nokuzethula. Ubani odinga impendulo ethi “s’thandwa, ingabe le ngubo iyangifanela?” Uma uthanda futhi uzizwa umangalisa kuyo? Yigqoke uhambe! Angimbuzi nhlobo umyeni wami ukuthi kuyangifanela noma cha, ngivele ngiphume ngimi ngomumo - naye uhlezi ethanda.
Indlela yokwakha ubuhlobo obuqinile nendoda yakho?